Kudutshulwe kwabulawa intombazane e-Ashdown | News24
Kudutshulwe kwabulawa intombazane e-Ashdown
ULindelwa Bowes odutshulwe wabulawa ngempelasonto.ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UMNDENI wentombazane edutshulwe yabulawa ekhaya layo ngoLwesihlanu ebusuku mhla ziyi-9 kuLwezi (November) uthi namanje usashaqekile ngalesi sigameko.
ULindelwa Bowes (18) wase-Ashdown nobenza u-Grade 12 eSiyahlomula High School, ungenelwe abantu abangaziwa bamdubula bambulala ngesikhathi elele ekhaya lakhe. Isidumbu sikaLindelwa sitholwe ngumama wakhe sidindilize embhedeni ngoMgqibelo ekuseni sinenxeba lokudutshulwa esihlathini.
Ngokusho kuka-anti kaLindelwa, uNks Noma Bowes, uthe uLindelwa wagcina ukubonakala ngoLwesihlanu ngesikhathi eyolala egumbini lakhe.
“Umama wakhe wavuka ekuseni ngoMgqibelo umnyango wangaphandle endlini ugengelezile wazitshela ukuthi uvulwe wuLindelwa ngoba kade efuna ukuya endlini yangasese. Ngemuva kokubona ukuthi akekho endlini yangasese wabe esehamba emqalaza ezinkundleni zemidlalo lapho ayaye ahambe ayojima khona, kodwa wangamthola.
“Wabuya wahamba wayombheka egumbini ekade elele khona kodwa wamfica elele embhedeni wakhe eseshonile,” kubeka yena.
Unina kamufi uthe ababulali bagqekeza umnyango ukuze bangene kanti usola ukuthi kukhona into abayenza ukuze umsindo wesibhamu ungeke uzwakale.
“Ngangilele umnyango egumbini lami uvuliwe kodwa angizange ngizwe lutho ngesikhathi begqekeza umnyango nangesikhathi bedubula. Bangibulele kakhulu ngokubulala indodakazi yami ebeyizilungele kangaka ihleli izihlekela ngaso sonke isikhathi. ULindelwa ubenekusasa eliqhakazile kwazise ubenguzime, edlala ibhola lombhoxo edlalela ama-Sharks kanti futhi nesikole ubesithanda. Kuningi okuhle ebengisakubhekile enganeni yami kodwa manje angeke kusenzeka,” kubeka yena.
Lo mndeni uveze ukuthi ukubulalwa kukaLindelwa basola ukuthi kuhlangene necala lokudlwengula alivula ngenyanga kaMasingana (January ) kulo nyaka. Bathe ngokubona kwabo lena ngenye yezindlela zokuthi kucishwe ubufakazi.
“Into engiphatha kabi kakhulu ukuthi uma kungukuthi bebefuna ukuba kusulwe icala kungani-ke okungcono bengazange bangene bamthathe bamulethe kumina bemkhombe ngesibhamu bathi angisule icala kunokuthi baze bambulale. Bengizolisula icala kunokuba ngilahlekelwe yingane yami ngoba vele ubezama ukubhekana nale nto eyamehlela njengoba nasesikoleni kade esenza kahle,” kubeka unina wakhe.
Uqhube wathi seloku uLindelwa ehlelwa yilesi sigameko sokudlwengulwa impilo yakhe ibingasafani neyezinye izingane njengoba ubesengumuntu obesehleli ehleli endlini ezikhiyele ngoba esabela impilo yakhe. Uthe kwenzeka lesi sigameko nje uLindelwa kwakumele ahambe aye kobhalela izivivinyo zakhe ngaphandle kwalesi sifundazwe ngoba kusatshelwa ukuphepha kwakhe njengoba umsolwa okuthiwa nguyena owamdlwengula kade aziwa ukuthi uyingozi.
“Yonke into yase ilungile nomshushisi sasayina sathola nomuntu ayezohamba naye ngoba bebazi ukuthi akaphephile. Ngemuva kwalokho ngavele ngatshelwa ukuthi umshushisi obengamele leli cala usehambile usesebenzela endaweni yase-Port Edward nokuyilapho kwaphazamiseka khona ukuhamba kwakhe.
“Nami besengizitshelile ukuthi uma ngabe eqeda nje ukubhala izivivinyo zakhe ngiyamuhambisa ukuba aphume aphele kulesi sifundazwe ukuze ezophepha kodwa lokho akusenzekanga. Ngibuhlungu kakhulu ngiyathemba ukuthi umthetho uzokwazi ukudlala indima yawo manje,” kubeka yena.
Ikhansela lakule ndawo uMnu Dumisani Phungula uthe basashaqekile ngalesi sigameko kanti futhi bakhathazekile ngezinga lobugebengu eliqhubekayo kule ndawo.
“Emasontweni amabili adlule kunentombazane encane edlwengulwe yinqwaba yabafana bayiphonsa ebhulohweni manje sekwenzeka lokhu futhi. Sifuna amaphoyisa akhuphule amasokisi ukuqinisa ukuphepha kule ndawo. Sesihambile saya nasehhovisi lokuPhepha koMphakathi likaMnu Mxolisi Kaunda sayocela ukuba lolu daba balucubungule kahle. Sifuna ukuthi abenzi bobubi baboshwe ngoba umphakathi uhleli lubhojozi manje umuntu sekumele elokhu ehamba eqalaza emahlombe ukuthi ayikho yini imoto emulandelayo ngoba phela lezi zigebengu zicanasa ngezimoto.
“Okubuhlungu wukuthi bonke laba bantu abenza lokhu akusibona abakule ndawo kodwa basuka lapho behlala khona bazophendula indawo yethu indawo yokudlalela,” kubeka yena.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni iKwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbhele usiqinisekisile isigameko kodwa wathi bekungakakaboshwa muntu ngaso.